Global Voices teny Malagasy » Ny fiovan’ny toetrandro aty Afrika: Feo avy any Kenya sy any am-pielezana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jona 2018 3:45 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rotich Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Fahasalamàna, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Navoakan'ny The Economist , NPR  sy ireo vaovao hafa ny ampahany tamin'ny adihevitra momba ny fiovan'ny toetr'andro aty Afrika. Ato amin'ity lahatsoratra fanokafana ho an'ny vaovaon'ny tontolo iainana ity dia mamaky sy mandre ireo feo roa isika, ny iray avy any amin'ny kaontinanta Afrikana amin'ny alalan'ny bilaogy ‘Kenvironews ‘ , sy ny feon'i Dr. Pius Kamau, dokotera any Denver. Ireo feo ireo no mitondra antsika mankany Afrika atsimon'i Sahara, ao Kenya, izay ahitana ny fiovan'ny toetrandro misy fiantraikany amin'ny fambolena sy ny fahasalamana.
Mifantoka amin'ny adihevitra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fiakaran'ny hafanana any amin'ireo toerana izay antonony teo aloha ao Nairobi, sy ny fiverenan'ny tazomoka indray ny bilaogy momba ny tontolo iainana sy politika ao Kenya .
Niresaka momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro any amin'ny toeram-pambolena kafe izay an'ny fianakaviany any Kenya i Dr. Pius Kamau, Kenyana any am-pielezana monina any Denver, tao amin'ny fandaharan'ny onjam-peo maraina  NPR . Azonao atao ny mihaino ilay fanehoan-kevitra ‘Rehefa tonga ny hain-tany dia maty ny fambolena Kenyana ‘. Nametraka ny fifandraisana feno misy eo amin'ny fahazaran'ny fiainana maoderina ao amin'ny tontolo mandroso – ny kafe vao mafana an'ny Starbucks, ny solika ampiasaina amin'ny SUV [fiara tsy mataho-dalana] – ary ny fiantraikan'ireny fahazarana ireny amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fanimbana ny toeram-pambolen'ny fianakaviany ao Kenya ny fanehoan-kevitr'i Dr. Kamau. Fanehoan-kevitra mahaliana izay mandinika ny olana mikasika ny safidin'ny any am-pielezana ny amin'ny tontolon'ny fampandrosoana, ny vokatry ny etona karbonika ary ny vokatr'izany ho an'ny tanindrazany. Nanamarika izy fa tsy maintsy ilaina ihany koa ho an'ny am-pielezana ny mandray fepetra amin'ny fiarovana sy ny fampihenana ny fiantraikan'izany amin'ny tontolo iainana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/14/121148/
 ny bilaogy momba ny tontolo iainana sy politika ao Kenya: http://kenvironews.wordpress.com/2007/08/15/kenya-climate-change-and-malaria/
 fandaharan'ny onjam-peo maraina: http://www.npr.org/templates/rundowns/rundown.php?prgId=3&agg=0&prgDate=08-13-2007&view=storyview
 Rehefa tonga ny hain-tany dia maty ny fambolena Kenyana: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=12732559